Qodobadii ka soobaxay Kulankii Abiy iyo Ururada Mucaaridka ah. | ogaden24
Qodobadii ka soobaxay Kulankii Abiy iyo Ururada Mucaaridka ah.
Nov 28, 2018 - Aragtiyood
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya, Abiy Ahmed ayaa shalay la kulmay madaxda 81 xisbi oo mucaarad ah kuwaas oo ka diiwaan gashay dalka Itoobiya, si uu ugala hadlo qorshe dib u habeyn loogu sameyn karo hanaanka doorashada dalkaas, sida uu sheegay xafiiska Abiy.
Abiy Ahmed ayaa ka dhabaynaya ballan-qaadkiisa ahaa in uu furo saaxada siyaasadda dalkaas, oo muddo ay haysteen isbaheysiga uu ka tirsan yahay ee talada dalka haya. Abiy Ahmed ayaa jaan rogay siyaasadda Itoobiya tan iyo markii uu xukunka la wareegay bishii April ee sanadkan aan ku jirro ee 2018.
Siyaasada fur furan ee Abiya ayaa horseeday in dalka lagu kusoo dhaweeyo xubnaha mucaaradka iyo Jabhada Gobanimadoonka ah ee dibada joogay oo ay kamid yihiin ONLF iyo OLF, waxaa kale oo xabsiyada laga sii daayey maxaabiis badan, islamarkaana madaxa guddiga doorashada dalka ayaa loo magacaabay gabadh mucaarad hore ahaan jirtay.
Kulankii shalay dhacay ayaa diiradda lagu saaray isbeddelada loo baahan yahay si loo xaqiijiyo in doorashada soo socota ay noqoto mid xor iyo caddaalad ah, sida lagu sheegay qoraal uu xafiiskiisa soo dhigay twitter. Isbaheysiga Itoobiya xukuma ee EPRDF oo Abiy uu ka tirsan yahay isla markaana xulufo la ah reer galbeedka ayaa haystay awoodda dalkaas tan iyo sanaddii 1991-kii.
Kooxdan iyo xisbiyada ku xidhan ayaa ku fadhiya dhammaan kuraasta baarlamanka. Abiy ayaa toddobaadkii tegay waxa uu Birtukan Mideksa u magacaabay inay noqoto madaxa guddiga doorashada la qorsheeyey inay dhacdo 2020.